All-time high USD exchange rate affects import market in Myanmar - Worldnews.com
All-time high USD exchange rate affects import market in Myanmar
by Khin Zar Thwe
YANGON, Sept. 21 (Xinhua) -- U.S. dollar exchange rate against Myanmar kyat has reached its historical high level, affecting import market and prompting commodity price hike in Myanmar.
The U.S. dollar exchange rate continued to rise sharply to 1,630 kyats per dollar in the country's domestic
"We need to boost export sector as Myanmar seesasignificant unbalance between export and import market. High commodity price will haveabig impact on working class people,"
ဂျွန်လွင် စီစဉ် တဲ့ "Myanmar Int'l Fashion Week 2018" ဖက်ရှင်ပြပွဲ
ချီချီ အသက် (၃၀) ပြည့်ရင် စိမ်းလဲ့တင် ကို လွှဲပေးချင်တဲ့ ချီချီ့ မေမေ
स्पेशल ऑपरेशन्स: इंडिया ‘म्यानमार’ हिंदी एपिसोड | Special Operations: India 'Myanmar' Hindi Ep
U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2018 | Việt Nam - Myanmar | Trực tiếp
Kết quả U21 Việt Nam vs U21 Myanmar: Khởi đầu thuận lợi
အိမ်စည့် အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ မေမြတ်နိုး
မြန်မာဇာတ်ကား-သူကြီိးသမီးဇီးသီး- သားညီ၊ဇွဲနိုင်ဝင်း၊ မင်းခ ၊ န၀ရတ်
ဦးလေး ငါးရံ့ / Official Funny / Myanmar
If you have ever wondered what it\_'s like to travel around Myanmar aka Burma, then this is the documentary series for you! In this first episode we pick up our backpacks and travel from the comfort of Chiang Mai - Thailand, over the border to the stunning landscapes of Pha-An. To watch our adventures in Yangon, Bagan, Mandalay and Hsipaw - please SUBSCRIBE for more videos. If you enjoyed this first episode be sure to like, and more importantly subscribe to watch the next3episodes, as well as all our future travel series and beyond! Thanks to Steve Yalo for coming along on this trip, please head over to his channel to watch the last few episodes as and when they are released. Steve\_'s Channel - https://www.youtube.com/user/YaloVids Want to SUPPORT this channel to make more RAD TRAVEL videos like these? PICK UP at BUDGETEERS T-Shirt Here!!! - https://teespring.com/stores/the-budgeteers-store For all the latest and greatest from The Budgeteers be sure to FOLLOW US - Instagram - https://www.instagram.com/thebudgeteers/?hl=en Facebook - https://www.facebook.com/Budgeteers/ Subscribe to YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCckFCPnDSf9mMCkdEq7tTcQ MUSIC PROVIDED BY - Epidemic Sound - Get your 30 day FREE trial here today - https://goo.gl/yhMWk3 Don\_'t ask us for the track names as we won\_'t tell because everyone uses our tracks..... (you know who you are)..... (evil stare)... ;)...
\_"Myanmar Int\_'l Fashion Week 2018\_" နိုင်ငံတကာ ဖက်ရှင်ပြပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့မှ (၉) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်၊ ရွှေထွဋ်တင်ကွင်းမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကို အနုပညာရှင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး (၂၀၁၈) ခုနှစ်အတွက် ဖန်တီးမှု ဖက်ရှင် အ၀တ်အစားများကို မော်ဒယ်များမှ ၀တ်ဆင်ပြခဲ့ပါတယ်။ Myanmar Celebrity Update: John Lwin from Star & Model Agency\_'s International Fashion Week... #JohnLwin #StarAndModelAgency...
\_"အန်တီတို့က သားသမီးတွေရဲ့ လက်ထဲကို စိမ်းလဲ့တင် အပန်းခြေစခန်းကို ပြောင်းရွှေ့ပေးချင်တယ်။ ချီချီ အသက် (၃၀) ပြည့်ရင် စိမ်းလဲ့တင် ကို လွှဲပေးချင်ပါတယ်\_" လို့ပြောလာတဲ့ Beauty Blogger နေခြည်ဦး ရဲ့ မိခင် အန်တီဆွေ နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Nay Chi Oo\_'s Mom, Aunty Swe says she want Chi Chi to inherit Sein Lae Tin Resort when Chi Chi turns 30. #NayChiOo #SaneLetTinResort #AuntySwe...
उत्तरपूर्वी भारत में हुऐ इस दशक के सबसे घातक आतंकी हमले में १८ जवान शहीद हुए थे। भारतीय सेना के लिऐ इस का जल्द और कड़ा जवाब देना ज़रूरी था। देखिये #स्पेशलऑप्सइंडियाम्यानमार की सच्ची कहानी | For more videos, Subscribe to HISTORY TV18 Channel: https://www.youtube.com/user/HistoryIndiaTV?sub_confirmation=1 Click below link to watch more amazing stories from India: https://www.youtube.com/playlist?list=PLL5BKEmnxmG3vzm8FDU1ksGTnaGwqlH4Z Like us on Facebook: https://www.facebook.com/HISTORY-238044912896496/ Follow us on Twitter: https://twitter.com/HISTORYTV18 Join us on Google+: https://plus.google.com/102922349832606746297 Visit Our Website: https://www.historyindia.com/...
Bình luận trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam - Myanmar trong khuôn khổ Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2018. Đăng ký theo dõi kênh: https://goo.gl/m1hvhH ----- Thể Thao 360 là kênh của Báo Thanh Niên. Đặc biệt, Thể Thao 360 sẽ thường xuyên tường thuật trực tiếp các sự kiện thể thao, các trận đấu thể thao tại Việt Nam và trên Thế giới. Xem thêm tại: video.thanhnien.vn Facebook: facebook.com/thanhnien 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Q.3, TP HCM ĐT: (+84.8) 39302302 Fax: (+84.8) 39309939 Email: tnmedia@thanhnien.vn...
A video that appears to show Myanmar police officers beating members of the Muslim Rohingya minority duringasecurity operation has emerged on Burmese social media. The government said the incident, apparently filmed byapolice officer, happened in restive Rakhine state in November and several officers had been detained. Please subscribe HERE http://bit.ly/1rbfUog World In Pictures https://www.youtube.com/playlist?list=PLS3XGZxi7cBX37n4R0UGJN-TLiQOm7ZTP Big Hitters https://www.youtube.com/playlist?list=PLS3XGZxi7cBUME-LUrFkDwFmiEc3jwMXP Just Good News https://www.youtube.com/playlist?list=PLS3XGZxi7cBUsYo_P26cjihXLN-k3w246...
ket qua tran dau u21 viet nam vs u21 myanmar khoi dau thuan loi *Tin hot 24h là kênh chuyên tổng hợp các video giải trí,tin tức, sự kiện,tin tức thể thao và đặc biệt là tin tức về bóng đá mới nhất, hay nhất trong 24h qua *Hãy bấm nút \_"Đăng ký\_" kênh để không bỏ lỡ qua các Video hay nhất trên kênh của chúng tôi. https://www.youtube.com/channel/UC30cAcijN8DMLGaJBrktGBQ?view_as=subscriber *Mọi thông tin xin liên hệ: nhatquanghstpn@gmail.com...
\_"Miss Supranational 2018 ဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲမှာ အခက်အခဲရှိခဲ့တဲ့ ရွှေအိမ်စည် အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ Never Give, Eain Si !!\_" လို့ အားပေးလာတဲ့ အလှမယ်၊ သရုပ်ဆောင်၊ မော်ဒယ် မေမြတ်နိုး နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Actress, Model May Myat Noe says Eain Si not to give up! #ShweEainSi #MayMyatNoe #MyanmarActress...
မြန်မာဇာတ်ကားများကို ရုပ်သံကြည်လင် HD Quality ဖြင့် နေ့စဉ် တင်ဆက်ပေးနေသည်။ မပျက်မကွက်ကြည့်ရအောင် Mahar ကို Subscribe လုပ်ထားပါ။ * မဟာ ရုပ်သံလိုင်း မဟာကို တီဗီကနေ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း မဟာ ရုပ်သံလိုင်းမှ ရပ်ဝေး ရပ်နီးရှိ ရွှေမြန်မာများအတွက် မြန်မာဇာတ်ကားများကို နေ့စဉ် (၂၄) နာရီလုံးလုံး အခမဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ မဟာရုပ်သံလိုင်းကို တီဗီမှ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် စလောင်းရုပ်သံဖမ်းစက် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ PSI, IPM, INFOSAT စလောင်းများဖြင့် မဟာရုပ်သံလိုင်းကို ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပြီး စလောင်းစက်ရဲ့တပ်ဖိုးမှာလည်း ၃သောင်းမှ ၄သောင်းဝန်းကျင်တွင်သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး လစဉ်ကြေး နှစ်စဉ်ကြေး စသည့် မည်သည့်အခွန်အခမှ ပေးဆောင်စရာ မလိုအပ်တဲ့အတွက် တစ်သက်လုံး တစ်ကြိမ်သာ ငွေကုန်ပြီး ၂၄နာရီလုံး အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ကာ စလောင်းများတွင် မဟာရုပ်သံလိုင်းအပြင် အခြားပြည်တွင်း ရုပ်သံလိုင်းများနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ရုပ်သံလိုင်းများကိုလည်း ဖမ်းယူကြည့်ရှုနေနိုင်တဲ့အတွက် အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ မဟာရုပ်သံလိုင်းကို မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ လာအို နိုင်ငံများမှ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ - online channel 🌐 အင်တာနက်မှကြည့်ရသော 🌐 နှင့် - offline channel 🎬 တီဗီဖြင့်ကြည့်နိုင်သော 🎬 စသဖြင့် နေရာစုံမှ လွှင့်ထုတ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ * Mobile Mobile App မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်မှာ Mahar App-မဟာ အပလီကေးရှင်းကို download နှင့် install လုပ်ပြီး မြန်မာဇာတ်ကားများစွာကို FREE ခံစား ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အသစ်စက်စက် မြန်မာဇာတ်ကား ရုပ်ရှင်များကိုလည်း မဟာမိုဘိုင်း အပလီကေးရှင်းမှာ တင်ထားပါတယ်။ * Android ဖုန်းသုံးသူများ အပလီကေးရှင်း ဒေါင်းရန် https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abccontent.mahartv&pageId=none&rdid=com.abccontent.mahartv * Mahar TV social network...
If you have ever wondered what it\_'s like to travel around Myanmar aka Burma, then this is the documentary series for you! In this first episode we pick up our backpacks and travel from the comfort of Chiang Mai - Thailand, over the border to the stunning landscapes of Pha-An. To watch our adventur
\_"Myanmar Int\_'l Fashion Week 2018\_" နိုင်ငံတကာ ဖက်ရှင်ပြပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့မှ (၉) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်၊ ရွှေထွဋ်တင်ကွင်းမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကို အနုပညာရှင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး (၂၀၁၈) ခုနှစ်အတွက် ဖန်တီးမှု ဖက်ရှင် အ၀တ်အစားများကို မော်ဒယ်များမှ ၀တ်ဆင်ပြခဲ့ပါတယ်။ Myanmar Celebrity Update: John L
\_"အန်တီတို့က သားသမီးတွေရဲ့ လက်ထဲကို စိမ်းလဲ့တင် အပန်းခြေစခန်းကို ပြောင်းရွှေ့ပေးချင်တယ်။ ချီချီ အသက် (၃၀) ပြည့်ရင် စိမ်းလဲ့တင် ကို လွှဲပေးချင်ပါတယ်\_" လို့ပြောလာတဲ့ Beauty Blogger နေခြည်ဦး ရဲ့ မိခင် အန်တီဆွေ နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Nay Chi Oo\_'s Mom, Aunty Swe says she want Chi Chi to inh
उत्तरपूर्वी भारत में हुऐ इस दशक के सबसे घातक आतंकी हमले में १८ जवान शहीद हुए थे। भारतीय सेना के लिऐ इस का जल्द और कड़ा जवाब देना ज़रूरी था। देखिये #स्पेशलऑप्सइंडियाम्यानमार की सच्ची कहानी | For more videos, Subscribe to HISTORY TV18 Channel: https://www.youtube.com/user/HistoryIndiaTV?sub_confirma
Bình luận trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam - Myanmar trong khuôn khổ Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2018. Đăng ký theo dõi kênh: https://goo.gl/m1hvhH ----- Thể Thao 360 là kênh của Báo Thanh Niên. Đặc biệt, Thể Thao 360 sẽ thường xuyên tường thuật trực tiếp các sự kiện thể thao, các trận đấu thể
A video that appears to show Myanmar police officers beating members of the Muslim Rohingya minority duringasecurity operation has emerged on Burmese social media. The government said the incident, apparently filmed byapolice officer, happened in restive Rakhine state in November and several off
ket qua tran dau u21 viet nam vs u21 myanmar khoi dau thuan loi *Tin hot 24h là kênh chuyên tổng hợp các video giải trí,tin tức, sự kiện,tin tức thể thao và đặc biệt là tin tức về bóng đá mới nhất, hay nhất trong 24h qua *Hãy bấm nút \_"Đăng ký\_" kênh để không bỏ lỡ qua các Video hay nhất trên kênh của
\_"Miss Supranational 2018 ဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲမှာ အခက်အခဲရှိခဲ့တဲ့ ရွှေအိမ်စည် အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ Never Give, Eain Si !!\_" လို့ အားပေးလာတဲ့ အလှမယ်၊ သရုပ်ဆောင်၊ မော်ဒယ် မေမြတ်နိုး နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity Update: Actress, Model May Myat Noe says Eain Si not to give up! #ShweEainSi #MayMyatNoe #
မြန်မာဇာတ်ကားများကို ရုပ်သံကြည်လင် HD Quality ဖြင့် နေ့စဉ် တင်ဆက်ပေးနေသည်။ မပျက်မကွက်ကြည့်ရအောင် Mahar ကို Subscribe လုပ်ထားပါ။ * မဟာ ရုပ်သံလိုင်း မဟာကို တီဗီကနေ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း မဟာ ရုပ်သံလိုင်းမှ ရပ်ဝေး ရပ်နီးရှိ ရွှေမြန်မာများအတွက် မြန်မာဇာတ်ကားများကို နေ့စဉ် (၂၄) နာရီလုံးလုံး အခမဲ့ ထုတ်လွှင